Avions ababhukudi - Rikoooo
X-Plane Indiza ye-9
I-Tupolev Tu-204 X-Plane 9 Thwebula
Incazelo 2 246
Usayizi: 66 MB
Ukungena X-Plane Uhlobo lwe-10 lwalesi sengezo chofoza laphaIphelelisi eliphelele (imodeli + 2d iphaneli + VC + imisindo) I-Tupolev Tu-204-300 ngemibala yempi yezindiza yaseRussia i-Vladivostok Air. Izindiza zekhwalithi enhle enemodeli yokundiza enengqondo. Yizame.I-Tupolev Tu-204 iyinhlangano ephakathi nendawo lapho i-j ... Funda kabanzi
Kuyavumelana Kuhlolwe kulungile nge X-Plane 9
Igama lefayela tupolev_tu-204_x-plane_9.zip
I-Remos GX nge-vFlyteAir v5.1 X-Plane 9 Thwebula
Incazelo 1 345
Usayizi: 17.9 MB
Uhlobo lwe-XP9. Yenguqulo ehambisana ne X-Plane I-10 chofoza lapha.Lokhu okungeziwe ku-Remos GX kufike okwesibili kulo mncintiswano obuhlelwe ngoJanuwari 2013 ngu x-plane.org. Isengezo sekhwalithi enhle kakhulu lapho ukumbumbuluzwa kudluliselwe ekufezeni iqiniso (bona ividiyo). I-PoH ifakiwe ezansi ... Funda kabanzi
Igama lefayela remos_gx_by_vflyteair_v5.1_x-plane_9.zip